Monday November 20, 2017 - 15:52:34 in Wararka by Super Admin
Hadal dad badan ka yaabiyay waxaa dhawwaan jeediyay mid kamida mas;uuliyiinta qoyska talada haya Ee dalka Imaaraatka Carabta kaas oo si aan qarsoodi laheyn u sheegay in ilaah ay Caabudaan ka dhigteen Max'med Bin Zaayad hoggaamiyaha wadanka!
Jeneraal Cabdullaahi Sayid Al-haashimi oo ah wakiilka wasaaradda difaaca imaaraatka carabta oo ku sugnaa shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Dubai ayna isugu yimideen taliyaasha ciidamada cirka adduunka ayaa xaqiijiyay in ay Caabudaan Hoggaamiyahooda.
Wariye reergalbeed ah ayaa wakiilka Wasaarada Difaaca weydiiyay su'aalo ay kamid ahaayeen "dhinaca kale haddii aan ku weydiiyo arrin ku saabsan iiraan waxaad daris latihiin beershiya oo ah dowlad weyn taas oo doonaysa in Ajandaheeda ay ku fuliso mandiqadda, waa sidee aragtida imaaraatka carabta ee arrintan? Farriin Ceynkee ah ayaad udiraysaan Washington oo ku saabsan iiraan oo dhan ka agdhow wadamada gacanka carabta?"
Wakiilka Wasaaradda Difaaca Imaaraatka Carabta (UAE) wuxuuna ku Jawaabay hadal gaalnimo cad ah isagoo sheegay in hoggaamiyaha dowladooda imaaraatka ay Caabudaan uuna yahay ninka hanuuniya.!.
Halkan ka Daawo Warkan yaabka leh ee kasoo yeeray Mas'uulkan ama Hoose Ka Daawo